🥇 ▷ Daraasad: Jarmalku waxay doorbidaan inay ku ciyaaraan taleefanka casriga ah ✅
Daraasad: Jarmalku waxay doorbidaan inay ku ciyaaraan taleefanka casriga ah
Sida lagu sheegay daraasad ay sameysay Bitkom, sanadkaan casriga ah wuxuu noqday aaladda ugu caansan Jarmalka. Kaalinta labaadna waxaa hogaamiya qalabka ciyaarta, ka dibna buugaagta iyo kiniiniyada, ka dibna PC desktop-ka.
Ciyaartoyda dhexdooda, taleefanka casriga ah wuxuu noqday aaladda ugu caansan ciyaaraha oo leh boqolkiiba 85, ka dib markii sanadkii la soo dhaafay 79 boqolkiiba ay wali ka dambeyso qasiidooyinka ciyaarta, oo qayb ka ahaa boqolkiiba 85 sanadka 2018 oo sanadkan ay timid 77 boqolkiiba, Marka loo eego daraasadda Bitkom waxay si dhow ula socotaa kaalinta saddexaad, buugga farriinta oo leh boqolkiiba 74, ka hor intaadan gaarin fogaannada muhiimka ah Kiniiniyadaha ayaa tiriyay 60 boqolkiiba. Si kastaba ha noqotee, tani waa horumar la taaban karo oo ah 7 boqolkiiba dhibcaha marka loo eego sanadkii hore. Boqorka loo maleynayo inuu yahay khamaarka, kumbuyuutarka PC-ga, wuxuu raacaa kaliya 48 boqolkiiba, laakiin wuxuu xasilloon yahay (2018: 47 boqolkiiba).
Da ‘da’ oo dhami way ciyaarayaan
Ku ciyaarista aaladaha dijitaalka ah ayaa soo gaadhay da ‘kasta, ayay sharraxaysaa Bitkom, in kasta oo ay dhallinyarradu sii wadaan in ay qaybta ugu badan ka galaan. Boqolkiiba 71 dadka u dhaxaysa 16- illaa 29-jiradu, 65 boqolkiiba carruurta u dhaxaysa 30 illaa 49-sano jir iyo 25 boqolkiiba carruurta 50- illaa 64-jirku waxay ku khamaaraan aagagga kala duwan. Silver Gamer wuxuu ugu yeeraa ciyaartooyda Bitkom ee ka weyn 65 sano jir, kuwaaso matalaya saami dhan 13 boqolkiiba. Ciyaartu wali waa wax yar oo caan ka ah ragga (45 boqolkiiba) dumarka marka loo eego (41 boqolkiiba). Xaqiiqda ah in cayaaruhu soo gaareen tiro balaaran waxay muujineysaa bayaankii afaraad ee kasta oo Jarmal ah (25 boqolkiiba) in ciyaarta fiidiyowga iyo kombuyuutarradu ay yihiin hanti dhaqameed sida buugaagta, filimada ama muusikada. Saddexdii qofba mid ka mid ah jawaab bixiyaasha ayaa u sheegay Bitkom inuusan mar dambe qiyaasi karin nolol la’aan ciyaarta ciyaaraha fiidiyowga ah.
Iibso dukaamada dhijitaalka ah ee ugu caansan
Wixii ku kharash gareynaya inta lacag lagu ciyaarayo, fahamka dabeecada iibsiga ciyaartoydu. Ciyaartoyda dhexdooda, boqolkiiba 64% waxay lacag ku qarash gareeyeen hiwaayadda 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Helitaanka dhijitaalka ah ee cayaaraha mashiinnada sida Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store, Steam, Origin ama Uplay oo leh boqolkiiba 28 saamiyada ugu badan. Kaliya gadaasho waxay la socotaa boqolkiiba 26 laakiin mar horeba qarashka wax iibsiga ciyaarta iyo 25 boqolkiiba ajuurada khidmadaha ee khadka tooska ah. Kaliya 16 boqolkiiba ayaa yimaada iibsashada ciyaaraha ganacsiga taagan. Marka loo eego qiime celcelis ahaan ciyaarta sida Xbox Game Pass, PlayStation Hada ama Helitaanka Asalka 14 boqolkiiba ciyaartoydu waxay qarashgareeyeen lacag. Si kastaba ha noqotee, 30 boqolkiiba ciyaartoydu waxay sheegeen inaysan wax lacag ah ku qarash gareeynin kulamadii sannadkii hore. Taasi waxay u sabab noqon kartaa magacyo fara badan oo ciyaar-ciyaar, kuwaas oo lagu maalgeliyo wax-gadashada ciyaarta iyo xayeysiinta.
Xusuus-qorka dariiqa: Saldhigga macluumaadkan waa sahan ay sameysay Cilmi-baaris Bitkom iyadoo ku mataleysa ururka dijitaalka ah ee Bitkom. 1,224 Jarmal ah oo da’adoodu tahay 16 sano iyo wixii ka weyn ayaa khadka taleefanka lagu wareystay, waxaana ka mid ah 528 cayaartoy. Sahanku waa wakiil.